Ishingkụta Azụ na Nde Nde | Martech Zone
Azu na Nde Lakes
Tuesday, August 25, 2009 Monday, August 24, 2009 Adam Obere
Otherbọchị gara aga mụ na ndị otu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, pr na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-eri nri ehihie.
Douglas Karr, Nchoputa nke Martech Zone, na-agwa ìgwè ahụ okwu banyere mgbasa ozi mmekọrịta na 'ojiji o ji arụ ọrụ. Otu n'ime ihe ndị o kwuru metụrụ m ụdọ.
A ga m akọwa ya… Doug kwuru na mgbasa ozi na-adịbu ezigbo mma, ị nwere nnukwu ndị na-ajụ ase (Bipụta, TV, Redio) nke ị ga-azụta yana ihe ị ga - eme bụ ịchọpụta pasent ego gị . Were bụ nnoo ịkụ azụ maka ndị ahịa n'ime oke osimiri.
Ugbu a na elekọta mmadụ media, ahịa efu, Blọọgụ, netwọk mmekọrịta na ụzọ ọhụrụ ndị ọzọ nke nkwukọrịta ị na-agaghị akụ azụ n'oké osimiri ọzọ.
Ndị ahịa ugbu a nwere ọtụtụ nde ọdọ mmiri ịkụ azụ. Dị ka ịkụ azụ, ị nwere ike igbu oge gị na mbọ gị niile na ebe na-ezighi ezi. Ọzọkwa, dị ka ịkụ azụ, ịchọrọ ịchọta ndị na-ajụ ase (ọdọ mmiri) na-arụ ọrụ maka gị ma lekwasị anya na ndị ahụ.
Echere m na nke a bụ nnukwu ihe atụ maka ire ahịa n'ụwa taa. Ahịa n'ịntanetị na elekọta mmadụ media emeela mgbanwe dị mkpa n'ụzọ ndị ahịa ji atụ anya nkwukọrịta.
Yourlọ ọrụ gị ọ ka na-anwa ịkụ azụ n'oké osimiri?
Tags: sụọ ngọngọWordPress
Ahịa Twitter Faux Pas